တစ်ပြည်လုံး ငြိမ်းချမ်းပါက အချိန်တိုအတွင်း အရှိန်အဟုန်ဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးလာကာ တိုင်းရင်းသာြး?? - Yangon Media Group
တစ် ပြည်လုံး ငြိမ်းချမ်းပါက အချိန်တိုအတွင်းအရှိန်အဟုန်ဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးလာကာ တိုင်းရင်းသားပြည်သူများ၏ အိပ်မက်များ အထင်အရှားမြင်ရမည်ဟု အခိုင်အမာယုံကြည်ထားကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတက ပြောကြားခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက်တွင် ကျရောက်သည့် (၇၂) နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့အခမ်းအနားကို နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပခဲ့ကာ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်က သဝဏ်လွှာပေးပို့ပြောကြားလိုက် ခြင်းဖြစ်ပြီး အဆိုပါသဝဏ်လွှာကို ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေက တက် ရောက်ဖတ်ကြားပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”ပြည်ထောင်စု တစ်ဝန်းလုံး ငြိမ်းချမ်းသွားပြီဆိုပါက အချိန်တိုအတွင်း ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသ ကြီးများ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီး တိုင်းရင်းသားပြည်သူများ၏ အိပ်မက်များ အထင်အရှား မြင်တွေ့ကြရ မည်ဟု အခိုင်အမာ ယုံကြည်ထားပါသည်”ဟု သဝဏ်လွှာတွင် ဖော်ပြ ထားသည်။ ယင်းအပြင် နိုင်ငံတော်မှ အ ကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသည့် ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင် စုကြီး ပေါ်ထွန်းလာရေး၊ ငြိမ်းချမ်း ရေးနှင့် အမျိုးသားပြန်လည် သင့် မြတ်ရေး၊ ပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ သာယာဝပြောရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ တွင် တိုင်းရင်းသားအသီးသီးက အတူတကွလက်တွဲ ပူးပေါင်းပါ ဝင်ကြရန်လည်း နိုင်ငံတော်သမ္မတက တိုက်တွန်းထားသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ အ ရယူခဲ့သည့် လွတ်လပ်ရေးနှင့် အချုပ်အခြာအာဏာ ထာဝစဉ်တည်မြဲစေရန်၊ ပြည်ထောင်စုကြီးမပြိုကွဲရန် ပြည်ထောင်စုဖွား တိုင်းရင်းသားအား လုံးလက်တွဲမဖြုတ်စတမ်း ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရမည်ဟုလည်း နိုင်ငံ တော်သမ္မတက ပြောသည်။ ဘာသာစကား၊ ယဉ်ကျေးမှု စသည်ဖြင့် မတူကွဲပြားသည့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံ ဥမကွဲသိုက်မပျက်နေနိုင်သော ရေ ရှည်တည်တံ့သည့် နိုင်ငံတော်ဖြစ် စေရန် အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာ ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးပင်ဖြစ်ပြီး ၂၁ ရာစုပင်လုံသည် ယင်းကိုအကောင် အထည်ဖော်ရန် ဆောင်ရွက်နေ ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုမှ ရရှိလာသည့် နိုင်ငံရေးသဘောတူစာချုပ်ကို အ ခြေခံပြီး NCA စာချုပ်တွင် လက်မှတ် မရေးထိုးထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပါ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ရေးလမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့် ငြိမ်း ချမ်းရေးပန်းတိုင်သို့ ဆက်လက် လျှောက်လှမ်းလျက်ရှိကြောင်း နိုင်ငံ တော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်ကဆိုသည်။
ယင်းအပြင် ဒီမိုကရေစီဖက် ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနှင့် လျော်ညီသည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ တစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်ရေး၊ ၂၁ ရာစု ပင်လုံမှသည် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်း စဉ်များ အောင်မြင်သည်အထိ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် ပြည်သူများ ဘေးကင်းရေး၊ ကောင်းမွန်သော ပညာ ရေးနှင့် လုံလောက်သောကျန်းမာ ရေးစောင့်ရှောက်မှုများ နိုင်ငံသားတိုင်း ရရှိခံစားနိုင်ရေး ဝိုင်းဝန်းအ ကောင်းအထည် ဖော်ရန်လည်း ၎င်းကတိုက်တွန်းလိုက်သည်။ အဆိုပါ အခမ်းအနားသို့ ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေ၊ လွှတ် တော်ဒုဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်ထောင်စု ဝန် ကြီးများ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်များ၊ နေပြည်တော်ကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးများ၊ အစိုးရ အဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူများ၊ တိုင်းရင်း သား ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ရပ်မိ ရပ်ဖများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်နှင့်အတူ ကယားလူမျိုးတို့၏ ခေါင်းဆောင်နှင့် အမှတ်သင်္ကေတကိုပါ တစ်ပြိုင်တ??
‘တကယ် ကိုယ်လျှောက်လှမ်းမယ့် လမ်းကိုတော့ အနုပညာကိုပဲ ရွေးချယ်ထားပါတယ်’ မေကြည်